Jadwalka rasmiga ah ee doorashada madaxweynaha oo lasoo saaray (Aqriso) - Caasimada Online
Home Warar Jadwalka rasmiga ah ee doorashada madaxweynaha oo lasoo saaray (Aqriso)
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga qaban-qaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa goordhoweyd ku dhawaaqay in 15-ka May ay dhici doonto doorashada Madaxweynaha.
Guddiga Labada Gole BFS ee Qaban-qaabada Doorashada Madaxwaynaha ayaa jadwal ay soo saareen maanta sidoo kale ku sheegay in diiwan-galinta Musharaxiinta Madaxweynaha ay bilaaban doonto 8-da bishaan ayna socon doonto illaa 10-ka bishaan.
Hadal jeedinta Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa dhici doonto 11 illaa 12 May, ayada oo 13-ka iyo 14-ka bishaan uu guddiga soo dhameystiri doono u diyaar-garowga doorashada, islamarkaana maalinta ku xigta ay dhici doonto doorashada madaxweynaha.
Arrintan ayaa la rumeysan yahay inay ku timid cadaadiska Beesha Caalamka, oo hakad galiyay dhaqaalihii & deeqihii ay siin jirtay Soomaaliya iyo weliba culeysada kale ee ka dhashay daaha doorashada.
Guddiga qaban-qaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa shalay soo xulay Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo durtaba bilaabay dardar xoogan oo ku aadan qabsoomida doorashada.